स्मिता दाहालको ‘पानी कुवाको’ युट्युव ट्रेन्डिङमा शीर्ष स्थानमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
स्मिता दाहालको ‘पानी कुवाको’ युट्युव ट्रेन्डिङमा शीर्ष स्थानमा !
२०७५, ५ श्रावण शनिबार
काठमाडौं, साउन ५ । गायिका स्मिता दाहालको ‘पानी कुवाको’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युट्युवमा नेपाली गीत ट्रन्डिङको सबैभन्दा माथि पहिलो नम्बरमा पुगेको छ । त्यस्तै युट्युवको सबै भिडियोमध्ये यो गीत ट्रेन्डिङको दोश्रो नम्बरमा छ ।
युट्वुको ट्रेन्डिङ नम्बर एकमा भने दक्षिण भारतीय फिल्म ‘राम की जंग’ छ । गत सोमबार सार्वजनिक गरिएको गीतको भिडियो ५ दिनमा नै ट्रेन्डिङको नम्बर एकको नजिक पुगेको छ भने नेपाली गीतमा सबैभन्दा अगाडी छ ।
याे पनि पढ्नुस स्मिता दाहालको ‘मायालु तिमी कता छौ’लाई एक करोड भ्युज
स्मिताको यो गीत यसअघिका गीतभन्दा केही फरक धारको भएको बताएकी छन् । दाहालसँगै गायक सरोज ओलीले गाएको फरक धारको गितको म्युजिक भिडियोमा चर्चित नृत्य समुह ‘कार्टुन्ज क्रु’का सदस्य र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले उत्कृष्ट फिचरिङ गरेका छन् ।
बाल, राष्ट्रिय, आधुनिक तथा फिल्मी गरी ५५ भन्दा बढी गीत गाइसकेकी स्मिताको यो पहिलो ‘डान्सिङ नम्बर’ हो । यो गीतलाई युट्युवमा १३ लाख बढी पटक हेरिसकिएको छ भने ३१ हजारले लाइक गरेका छन् । दिनेश थपलियाको शब्द रहेको यस गीतमा वसन्त सापकोटाले संगीत भरेका छन् । कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेका छन् । हेर्नुस्- स्मिताको गीत
याे पनि पढ्नुस स्मिता र रविको ‘तिम्रै नामको सिन्दुर’सार्वजनिक
ट्याग्स: ‘पानी कुवाको, Panee kuwaako, युट्युव ट्रेन्डिङ, स्मिता दाहाल